I-HUAJING imveliso yemicrosoft eyenziweyo yamkela umgaqo wokunyibilika kwe-crystallization kubushushu obuphezulu. Ngokwendlela yemichiza yendalo yokwakheka kunye nolwakhiwo lwangaphakathi, oluveliswe emva kobushushu be-electrolysis kunye nokunyibilika kubushushu obuphezulu, ukupholisa kunye ne-crystallization, emva koko i-mica yokwenziwa inokufunyanwa.
I-HUAJING yomhlaba omanzi we-mica powder eveliswe kumgangatho olungileyo we-mica scrap. Ngexesha lokwenziwa kwenkqubo yokucoca, ukuhlamba, ukufunxa, ukutyumza uxinzelelo oluphezulu, ukomisa kubushushu obuphantsi, ukuhlolwa okucocekileyo, kuya kuba yinto efanelekileyo kakhulu yokugcwalisa izimbiwa. Inkqubo yayo yokuvelisa eyahlukileyo igcina ulwakhiwo lwangaphakathi lwe-mica, umlinganiso omkhulu, isalathiso esiphakamileyo sokukhanya, ubunyulu obuphezulu kunye nokubengezela, umxholo we-Iron kunye nesanti kunye nezinye iipropathi zeMizi-mveliso.
I-Huajing umhlaba omanzi wokutyabeka umgangatho we-mica powder wasebenzisa i-mica flake evela kwiLingshou Lubaishan Mineral, kwiPhondo lase-Hebei.Iveliswa ngokwahlukana kwendalo komoya kunye nenkqubo yokugaya emanzi ngokwahlukeneyo I-Muscovite mica yenza indima esebenzayo kwindidi ezahlukeneyo zokwaleka ukusukela ngenxa yengeniso yezoqoqosho. .
I-Huajing grade grade synthetic mica esetyenzisiweyo eyenziwe ngesandla eyenziwe nge-flake, i-untrawhite kunye ne-bright.It isebenza ngokubanzi kwi-high-end coating, ngaphandle kweempawu ze-mica powder, ukuxhathisa ukushisa kunokunyuka ukuya kwi-1200 ℃, ubunyulu bube yi-99.9% , Ukunyanzelwa kwevolumu kuphezulu kakhulu kune-mica yendalo.
I-Huajing grade grade yokugcoba i-Muscovite powder isebenzise i-mica flake evela kwi-Lingshou Lubaishan Mineral, kwiPhondo lase-Hebei. Indalo yeMuscovite mica yenza indima esebenzayo kwindidi ezahlukeneyo zokwaleka ukusukela oko yayiluncedo kwezoqoqosho.
I-mica powder eyomileyo ilungele ukumakishwa kwendlela, ukwakha ipeyinti yodonga lwangaphandle, udaka, anti-umhlwa ukutyabeka, njl.njl Ungadlala ngokufanelekileyo izibonelelo ze-mica enezinto ezimbini-ezibonakalayo, ukuphucula iipropathi zoomatshini befilimu yokutyabeka, kunye nokuchasana nokuchasana Umsebenzi wayo wokukhusela i-UV ungabuphucula ubume bemozulu yokwaleka.
I-Mica ikakhulu icacisa inkqubo yekristale eyi-monoclinal. Umxholo wentsimbi, onokuphakanyiswa ukusuka kwesiqhelo esiqhelekileyo ukuya esiqhelekileyo, kwaye intonga yombane inokufakwa.
I-Huajing yokwakha ibakala le-mica powder luthotho lweemveliso ezisisiseko ze-mica ezenziwa zi-mica flakes ezivela eLingshou, kwiphondo laseHebei. Ubungakanani beengqekembe zeemveliso zigubungela uluhlu lwe-5mm ukuya kwi-10um. Inkqubo yokuhlanjululwa iphuhlisiwe ngokuqhubekayo isithuba esingaphezulu kweminyaka engama-40. Okwangoku, ubukhulu becala isetyenziselwa ibhodi yomhombiso wangaphakathi, ibhodi yokulenga yangaphandle, imibhobho yogutyulo edityanisiweyo, izinto zokwakha ezinobungane kwindalo, iifestile zentsimbi yeplastiki kunye neminyango, imabhile engeyiyo njalo njalo. In ukutyabeka efayilini, oko stably esetyenziswa kwishishini lokwakha, ezifana yangaphandle udonga ipeyinti, ipeyinti yokumakisha, iipleyiti, ipeyinti enzima anti ezonakalisayo.